Ny Fivondronan'ny Fiangonana Batista Biblika eto Madagasikara, izay hafohezina amin' ny hoe FFBBM, dia fiombonan' ireo endriky ny fiangonana batista miorina eto Madagasikara izay isan' ny atao hoe fiangonana protestanta sady ara-pilazantsara. Na dia efa tonga teto Madagasikara tamin'ny taona 1935 aza ny finoana batista dia tamin'ny taona 1997 no nananganana ny FFBBM ka ny tanjona tamin'izany dia ny hanorenana sy hampandrosoana fiangonana izay sady ara-pilazantsara no mpitahiry ny rakitry ny ela. Tamin'ny taona 2005 dia efatra ireo fiangonana batista mpikambana ao amin'ny FFBBM.
Tantaran'ny batisma eto Madagasikara[hanova | hanova ny fango]
Tonga teto amin' ny Nosy tamin'ny alalan' ny Misiona Biblikan'i Madagasikara tamin' ny taona 1932 ny finoana batista. Ny Miosiona Biblikan'i Madagaskara dia nipoitra avy tamin'ny London Missionary Society (LMS). Ilay misionera anglisy, atao hoe Brinley Evans, sy ny vadiny no nirahina tamin' izany. Ny trano fiangonana batista voaorina voalohany dia ny ao Ankadivato tamin' ny taona 1935, taona izay nanombohan'ny fampielezana ny finoana batista eto Madagasikara. Nody tamin'ny taona 1944 i Brinley Evans mivady. Novana anarana ka natao hoe "Fiangonana Batista Biblika eto Madagasikara" tamin'ny taona 1963 ny fiangonanana najoron'ny Misiona Biblikan'i Madagasikara . Tamin'ny taona 2006 dia efa nanana fiangonana miisa 55 sy mpino miisa 3 000 izy. Tamin'ny taona 2016 kosa dia nitombo izany ka nahatratra 327 ny isan'ny fiangonana ary 8 902 ny isan'ny mpino.
Fandaminana[hanova | hanova ny fango]
Mahaleo tena amin'ny lafiny rehetra (fitantanana sy fombam-pivavahana) ny fiangonana batista biblika tsirairay isan-toerana, nefa izy rehetra dia miombona ao amin' ny Fivondronan' ny Fiangonana Batista Biblika eto Madagasikara (FFBBM) tarihin' ny Filan-kevi-pitantanan' ny FFBBM izay miara-mivory in-droa isan-taona miaraka amin' ny solon-tena isam-piangonana. Fidin' ny mpikambana ao amin' ny fiangonana tsirairay ny olona hatao mpitandrina ao amin' ny fiangonany. Nankalaza ny faha-80 taonany ny FFBBM tamin'ny taona 2013. Misy 65 ny fiangonana mikambana ao amin’ ny FFBBM. Ny fitambaran'ny mpino rehetra no tompon'ny fahefana amin'ny fampandehanana ny fiangonana ka tsy miavaka loatra ny sokajin'olona atao hoe "mpitondra fiangonana". Izany no atao hoe "kongregasionalisma".
Manome anjara toerana lehibe ny Baiboly ny Fingonana batista. Omeny lanja koa ny fahateraham-baovao, ny batisan'ny olon-dehibe, ny famitana iraka amin'ny fitoriana ny Filazantsara, ny fanoloran-tena ara-pitondrantena amin'ny fiainana.
Vondrona batista hafa[hanova | hanova ny fango]
Tsy ny FFBBM ihany no vondrom-piangonana batista misy eto Madagasikara fa ao koa ny Fiangonana Batista Finoana, ny Fiangonana Batista ara-Pilazantsara, sy ny maro hafa.
↑ Baptist World Alliance, Statistics Archived Jiona 18, 2016 at the Wayback Machine, bwanet.org, USA, nojerena tamin'ny 29 Septambra 2018.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fivondronan%27ny_Fiangonana_Batista_Biblika_eto_Madagasikara&oldid=1019296"
Voaova farany tamin'ny 12 Aogositra 2021 amin'ny 00:04 ity pejy ity.